श्रीमानले मन नपराउने श्रीमतीका बानीहरू | Kendrabindu Nepal Online News
श्रीमानले मन नपराउने श्रीमतीका बानीहरू
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार १२:३८
श्रीमानश्रीमती अर्थात् जीवनसाथीको सम्बन्ध निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । विवाहपछि दुई शरीर एक प्राण हुने मान्यताअनुसार संसारको सबैभन्दा घनिष्ट सम्बन्ध नै श्रीमानश्रीमतीको हो । कहाँकहाँ जन्मेहुर्केका दुई अपरिचितबीच सम्बन्ध गाँसिनु र सँगै जीवनयात्रा अघि बढाउनु आफैंमा अद्भुत कुरा हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि दुवैलाई एकअर्काका कतिपय बानी मन पर्दैन । जसका कारण दाम्पत्य जीवनमा बहस, मनमुटाव र झगडा समेत हुने गर्छ । कहिलेकाहीँ त श्रीमानश्रीमती दुवैलाई एकअर्काको नराम्रो बानीका कारण सँगै बस्न, केही कुरा भन्न मन नलाग्ने हुन सक्छ । पहिले थाहा नपाएका तर सँगै बसेपछि थाहा हुने त्यस्ता बानीले गर्दा वैवाहित सम्बन्धमै आँच आउन सक्छ ।
यहाँ श्रीमतीका केही त्यस्ता बानी बताइएको छ, जुन धेरैजसो श्रीमानलाई मन पर्दैन ।
सानो कुरालाई ठूलो बनाउने
प्रायः श्रीमतीहरू आफ्नो श्रीमानको मुखबाट अन्य महिलाको प्रशंसा सुन्न चाहँदैनन् । श्रीमानले अन्य कुनै महिलाको प्रशंसा गरेमा श्रीमतीको मनमा ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ । मनमा शंका बढ्छ । आफ्नो श्रीमान् ती महिलाप्रति आकर्षित भएको त होइन, भनेर सोच्न थाल्छन् । केही महिलाहरू त भावुक भएर श्रीमानलाई व्यंग्य गर्दै ठुस्स पर्छन् र ‘तपाईंलाई मेरो त कुनै कुरा मन पर्दैन’ पनि भनिदिन्छन् । कतिले त ठट्टैठट्टामा आफ्नो श्रीमानलाई ‘त्यसैसँग जानू न त’ समेत भनिदिन्छन् । श्रीमानलाई श्रीमतीको यस्तो बानी पटक्कै मन पर्दैन ।
यौन सम्बन्धलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नु
यौनसम्बन्ध श्रीमान् तथा श्रीमतीको नैसर्गिक आवश्यकताभित्र पर्छ । तर श्रीमतीहरू कहिलेकाहीँ प्राकृतिक आवश्यकताको यो कुरालाई आफ्नो हतियार बनाउने गर्छन् । उनीहरू श्रीमानसँग कुनै कुरामा मनमुटाव भयो भने अथवा कुनै कुराको लागि दबाव दिनुपरे श्रीमानलाई यौन सम्बन्धबाट वन्चित गर्छन् । एउटै ओछ्यानमा सुते पनि उनीहरू श्रीमानको विपरीत दिशातिर मुख फर्काएर सुत्छन् । श्रीमानलाई श्रीमतीको यो कुरा पनि मन पर्दैन ।
सीधा कुरा नगर्ने
कतिपय श्रीमतीहरू कुनै पनि कुरा स्पष्ट व्यक्त गर्दैनन् । उनीहरू सधैं घुमाइफिराइ कुनै कुराको संकेत दिने प्रयास गर्छन् । त्यस्तो बेला जब श्रीमानले उनीहरूको कुरा बुझ्दैनन्, उनीहरू उल्टै व्यंग्य गर्न थाल्छन् । त्यति गर्दा पनि श्रीमानले कुरा बुझेनन् भने श्रीमतीहरू चिडचिडाउन थाल्छन् । त्यसैले श्रीमानहरू श्रीमतीले कुनै पनि कुरा स्पष्ट शब्दमा व्यक्त गरून् भन्ने चाहन्छन् ।
व्यक्तिगत कुरालाई लिएर घोचपेच
अपनत्व तथा एकाधिकार जनाउनका लागि जब श्रीमतीहरू श्रीमान् अफिसबाट घर फर्किएपछि उनीहरूको अफिस ब्याग, पाइन्टको खल्ती, पर्स, मोबाइल, ल्यापटपजस्ता चिजहरूमा घोचपेच गर्न थाल्छन् अथवा ती चिजहरूको बारेमा चासो व्यक्ति गर्दै खोजीनीति गर्न थाल्छन् । यो कुराबाट श्रीमानहरू मनमनै निकै रिसाइसकेका हुन्छन् । धेरै चिन्ता त त्यो बेला महसुस हुन्छ, जब उनीहरूले आफ्ना श्रीमानसँग कुनै महिला, चाहे ती कुनै क्लाइन्ट नै किन नहुन्, उनको फोन, एसएमएस, फोटो अथवा कुनै कागजात देखे भने त त्यसका बारेमा विस्तृत रूपले जान्ने कोसिस गर्न थाल्छन् । पर्समा धेरै पैसा देखिन् भने त्यो पैसा कहाँबाट आएको, कसले दिएको भनेर केरकार गर्न थाल्छन् । यो कुरा श्रीमान्लाई मन पर्दैन ।
कतिपय श्रीमतीहरू एकपटक बोल्न थालेपछि लगातार बोलिरहन्छन् । उनीहरूमा त्यति धेरै कुराहरू कहाँबाट आउँछ, श्रीमानले थाहै पाउँदैनन् । जुनसुकै विषयमा उनीहरू ननस्टप कमेन्ट्री गर्न थाल्छन् । एक–एक मिनेटको अपडेट बिस्तारपूर्वक बताउँछन् । जब कि उनीहरूकै श्रीमान ती कुराहरू छोटकरीमा सुन्न चाहन्छन् । श्रीमतीको यस्तो बानी प्राय श्रीमान्लाई मन पर्दैन ।
केही श्रीमतीहरू श्रीमानलाई विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लगाइरहन्छन् । मानौं, उनीहरूमा आफ्नो श्रीमानको हरेक गतिविधि वा बानीप्रति आपत्ति छ । आज यो लुगा किन लगाएको ? आज किन चाँडै अफिस जान लागेको ? आज किन ढिला घर आएको ? यति धेरै फोनहरू किन गरिरहेको ? २–३ वटा मोबाइल फोन किन राखेको ? आदि जिज्ञासाहरूको लिस्ट निकै लामो हुने गर्छ । यस्ता प्रश्नहरू सोधेकोसोध्यै गरेर श्रीमतीहरूले श्रीमानहरूलाई सताइरहेका हुन्छन् । यस्तो बानी श्रीमानहरूलाई मन पर्दैन ।
सपिङ गर्नु सामान्य कुरा हो तर केही महिलामा यो लतकै रूपमा रहेको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ त उनीहरू टाइमपास गर्न अथवा मन बहलाउन पनि सपिङ गर्न जान्छन् । उनीहरूको सपिङ निकै बोरिङ हुन्छ । एक-एक चिजहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नु र तिनीहरूको मूल्य सोध्नु, कपडाहरूलाई शरीरमै लगाएर हेर्नु, आवश्यकता नभए पनि धेरैभन्दा धेरै खाने कुराहरू किन्नु, डिस्काउन्टको लोभमा धेरैभन्दा धेरै सामानहरू किन्नु र प्रयोग नै नगरी फ्याँकिदिनु उनीहरूको स्वभाव हुने गर्छ । श्रीमानहरूलाई श्रीमतीको यस्तो बानी एकजात मन पर्दैन ।
विहानैदेखि मोबाइलमा झुन्डिइरहने
कतिपय श्रीमतीहरूमा बिहानैदेखि मोबाइलमा झुन्डिरहने बानी हुन्छ । पहिले दिनभर टेलिसिरियलमा रम्ने श्रीमतीहरूले अचेल त्यसको विकल्प फेसबुक फेला पारेका छन् । उनीहरू आफ्ना हरेक क्रियाकलाप फेसबुकमा अपडेट गरिरहन्छन् । बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म फेसबुक तथा युट्युबमा झुन्डिरहने श्रीमतीको बानी श्रीमानलाई मन पर्दैन ।
यीबाहेक अन्य थुप्रै कुरा छन् जुन श्रीमानहरू रुचाउँदैनन् । तीमध्ये पनि श्रीमानकाे सानो कमजोरीलाई ठूलो बनाउने, कम महत्व र बढी महत्वको कुरामा फरक गर्न नसक्ने, पूजापाठ एवं अन्धभक्तिमा बढी समय खर्च गर्ने, आफ्नो श्रीमानभन्दा अरूमाथि बढी विश्वास गर्नेजस्ता बानीहरू श्रीमानलाई बिल्कुलै मन पर्दैन ।
दुई शरीर एक प्राण, यौनसम्बन्ध, शंकालु व्यवहार, सपिङको लत
Prevरक्सीले होस गुमाउँदाः २ वर्षदेखि आफूसँगै राखेकी प्रेमिकाको हत्या
आइफोन ११ मा छैन ५ जी, यस्ता छन् अरु विशेषताहरुNext
किन यौनले सम्बन्धलाई राम्रो गर्छ